News - Bishii Luulyo 2017, shirkadeena waxaa la guddoonsiiyey shahaadada hoggaamineed ee Enterprise ee Fujian Sayniska iyo Teknolojiyadda Giant.
Bishii Luulyo 2017, shirkadeena waxaa la siiyay shahaadada hormoodka ah ee Ganacsiga ee Fujian Sayniska iyo Teknolojiyada weyn.
Shahaadadani waxay caddaynaysaa in shirkadeennu ay leedahay hawlgal adag iyo koox maarayn, nidaam maaliyadeed oo hagaagsan, adkeysi suuq leh, qaab dhiirrigelin dabacsan. Wax qabadkuna waa wanaagsan yahay, wuxuu leeyahay awood horumarineed iyo qiimaha beerashada oo aad u badan.
In geeddi-socodka ah ee cilmi-baarista, horumarka, wax soo saarka, iibka iyo maaraynta, shirkadeena gaari doonaa tartan asaasi ah iyada oo loo marayo hal-abuurnimo farsamada, hal-abuurnimo maamulka, hal-abuurnimo adeeg iyo hab hal-abuurnimo, iyo in la siiyo alaabada iyo adeegyada tikniyoolajiyadda sare.
Iyada oo qayb muhiim ah ka ah nidaamka hal-abuurnimada, shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah (smes) waxay si dhakhso leh u hagaajinayaan xaaladdooda dhaqaalaha aqoonta iyo xilligii hal-abuurnimada. Smes ku saleysan tikniyoolajiyadda waxay noqdeen mid ka mid ah maaddooyinka muhiimka ah ee ikhtiraaca, hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed iyo is-beddelka guulaha sayniska iyo farsamada. Marka la barbardhigo shirkadaha waaweyn, shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee sayniska iyo teknolojiyadda waxay leeyihiin faa'iidooyin muuqda oo ku saabsan xamaasadda hal-abuurnimada, firfircoonida, iyo wax-ku-beddelka hal-abuurnimada hal-abuurnimada. Si kastaba ha noqotee, shirkadaha yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah waxaa badanaa sabab u ah baaxadda yar ee shirkadaha, la'aanta hibooyin cilmiyaysan iyo tiknoolajiyadeed, maalgashi aan ku filnayn hal-abuurnimada iyo dhibaatooyinka kale. Laga soo bilaabo waayo-aragnimada horumarinta gudaha, horumarinta shirkadaha ku-saleysan tikniyoolajiyadda yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah waa xambaara muhiim u ah hirgelinta saddexda istiraatiijiyad ee hal-abuurnimada madax-bannaan, horumar waara iyo awoodda hibada, waana xariirka ugu muhiimsan ee loo maro waddo cusub oo warshadeyn iyo u dhis bulsho heersare ah oo dhinac walba leh.
Waqtiga dhejinta: Jul-01-2017
Shirkadeena waxaa la gudoonsiiyay National High ...
"Sayniska waa xoog wadista gudaha muhiim u ah horumarka, erayga" ganacsi cusub oo farsamada sare "waxaa loola jeedaa aasaasiga ah ee aasaasiga ah xuquuqda hantida aqooneed ee lagu sameeyay iyada oo loo marayo cilmi-baaris joogto ah iyo horumarinta iyo isbeddelka farsamada ac ...
Dhul 3, Beerta Warshadaha, Magaalada Huanxi, Degmada Jin'an, Fuzhou, Fujian, Shiinaha